Inhloko ZeNdaba Mpandula 8, 2020
Asebetholakele beleCovid 19, eZimbabwe, sebezinkulungwane ezedlula eziyisikhombisa-7,298. Abazinkulungwane ezedlula ezinhlanu-5,455, babo babikwa sebesinde kuleligcikwane eselibulele abantu abedlula amakhulu amabili-210.
Abebandla le Zanu PF bathi iqula lakwele South Africa elebandla leANC kalisoze lingene imihlangano labamanye amabandla njalo belokhu beqina ngelokuthi akula nkinga elizweni njengalokho okutshiwo zinhlangothi ezehlukeneyo elizweni.
Abantu baveza imibono ehlukeneyo ngabakukhangelele kuqula elivela kwele SA elibikwa lifika lamhlanje elizweni ukuzocwayisisa ngokuhluphayo eZimbabwe ikakhulu ukusolwa kukaMongameli Emmerson Mnangagwa ocalwa ngokwephula amalungelo oluntu lokungabusi kahle akuphikayo.
Abebandla leMovement for Democratic Change Alliance – MDC-A elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa bathi balusizi ngokubhubha kobe ngummeli weKuwadzana edale lephalamende uHonourable Mirriam Mushayi ochazwe njengomuntu owayezinikele emsebenzini wakhe.
Inkosi yakwaMthwakazi uBulelani Lobhengula Khumalo useyethule uhlelo lwakhe lokwakha kabutsha lokuvuselelwa isizwe sikaMthwakazi esibisela kusibanga abesikuso ngesikhathi kubusa inkosi uMzilikazi.
Ku Livetalk namhlanje kuhlelo lwabasakhulayo olwe”The Connection” sikhangela sikhangela umonakalo osudalwe yikuqhamuka kwegcikwane leCovid 19 kwabatsha kanye lokuvulwa kwezikolo ngesikhathi seLockdown.